१३ औँ साग खेलकुदमा इसेवाको ‘ठगीधन्दा’ : दशरथ रंगशालामा एकै सिट ४ जनाको टिकट ! – Hamrosandesh.com
१३ औँ साग खेलकुदमा इसेवाको ‘ठगीधन्दा’ : दशरथ रंगशालामा एकै सिट ४ जनाको टिकट !
१३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलकुद प्रतियोगिता जारी रहँदै गर्दा साग भित्रका दर्जनौँ बेथिति सार्वजनिक भइरहेको छ । खेल हेर्न आउने दर्शकमाथि इसेवा नामक कम्पनिले डरलाग्दो ‘ठगीधन्दा’ चलाएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइटी विज्ञ अस्गर अलि मालिक रहेको इसेवाले खेल हेर्न आउने दर्शकमाथि ठगी गरेको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइटी विज्ञ अस्गर अलि
कुल १५ हजार क्षमता रहेको दशरथ रंगशालामा इसेवाले १ लाख १४ हजार भन्दा बढी टिकेट बेचेर करोडौं रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ । कतिपय व्यक्तिलाई एकै नम्बरको सिटको टिकट दुई जनालाई बेचेको समेत पाइएको छ ।
इसेवालाई कुन टेन्डर प्रक्रियाबाट १३ औँ साग खेलकुद प्रतियोगिताको टिकट बेच्ने जिम्मेवारी दिइयो त्यो समेत खुलाइएको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सुचना अधिकारी लोकेन्द्र बस्नेतले सम्झौताको आधारमा इसेवाले टिकेट काटेको बताए ।
शनिबार दशरथ रंगशालामा भएको माल्दिभ्स विरुद्धको नेपालको खेल हेर्न पुगेका अधिकांश दर्शक इसेवाबाट ठगिएको भन्दै प्रदशर्नमा उत्रिएका थिए ।
इसेवाले एकै नम्बरको टिकेट चार जनालाई बेचेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमै छरपष्ट भएको छ ।
इसेवाले दशरथ रंगशालाको ए फाइभ वानको टिकेट २ जनालाई र ए फाइभ जिरो नम्बरको टिकेट अन्य २ जनालाई बेचेको पाइएको थियो ।
स्काइ ब्रान्डिङ नेपालको नामबाट काटिएको टिकटको सिट नम्बर र अर्का एक व्यक्तिको सिट नम्बर एउटै छ ।
टिकटमा व्यापाक ठगी भएको पाइएपछि केही दर्शकले प्रहरीलाई उजुरी गर्ने धम्की समेत दिएका छन् ।
साग फूटबलको भिआइपी टिकेट खरिद गरेका विश्वास शर्माले इसेवा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने धम्की दिएका छन् । मैले १० बजेर ३० मिनेट जाँदा टिकेटको पैसा तिरेँ । तर टिकेट प्रीन्ट गर्नका लागि कष्टोमर कियरमा कल गरेँ । मैले आशा गरेको छु टिकट छिट्टै पाउन सक्छु,’ उनले भनेका छन्,‘यदि समयमा टिकट नभए तिमीहरुको ठगी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्छु ।’ दियो पोस्ट बाट
इसेवाको ठगीको विषयमा काठमाडौं प्रहरी कार्यालयमा उजुरी भने परिसकेको छैन । यद्धपी ठगीएका दर्शकहरु प्रहरीमा जाने तयारी गरेका छन् । ‘हाम्रोमा त्यस्तो उजुरी नै आइसकेको छैन,’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले भने,‘उजुरी गरेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमै जानु भएको होला ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग टिकट बेचविखनको सम्झौता इसेवाका रोशन लामिछानेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल फोन लागेन ।